outdoor antennas — MYSTERY ZILLION
October 2008 edited October 2008 in Networking
ကျွန်တော် wireless AP တစ်ခုကို outdoor antenna နဲ့ တွဲသုံးချင်လို့ပါ။
၂-၃မိုင် အကွာအေ၀းလောက်ကနေသုံးချင်လို့ပါ။ ရနိုင်/မရနိုင်၊ ရရင် ဘယ်တံဆိပ် ဘယ်လောက် dBi လောက်သုံးရမယ်ဆိုတာလေးကို MZ မှ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အကို၊ အမများ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်။
wireless (wifi)ကအလုံက နေ လသာကိုတွယ်လို့ရလားခင်ဗျာ့......:77::77:
Don't worry about that, there are one best guy in town, go to bar lan, ma har ban doo la st. Access Spectrum, Ph. 380 900, can call to Ko Tin Htoo Khaing, Please take care he is the owner and he is the technician, BCTech,MCSE,
no foolish MCSE, he is real MCSE OK, he can help, he sell wireless devices, he knows his products, I am telling he is one of best because I used his products and he can solve my problems but I warn you is using wireless will amke ualot more problems than cable networking.
အဲ့လိုသာရရိုးဆို။ ကျွန်တော်က ကြားကနေပြီး။ .. တွယ်မလေ.. ဟိ.. စက်q ရတီ ကောင်းအောင်ထား..
ဟိ .. ဘာမှဟုတ်ဖူး.. ဝင်နောက်တာ။:d
Ahh . I forgot to tell something is wireless networking is expensive. cheap ones make u crazy and annoying. I installed3wireless stations and cost me 4500. that's USD not KYAT OK...
ရလို့ကတော့ Password ကိုသည်Forumမှာတင်ပေးအုံးမှာ...o:)o:)
I will post to you assp about wifi anteena..
Global Secure Systems has said thataRussian's firm's use of the latest NVidia graphics cards to accelerate WiFi вЂpassword recovery' times by up to an astonishing 10,000 per cent proves that WiFi's WPA and WPA2 encryption systems are no longer enough to protect wireless data.
He said: вЂњThis breakthrough in brute force decryption of WiFi signals by Elcomsoft confirms our observations that firms can no longer rely on standards-based security to protect their data. Asaresult, we now advise clients using WiFi in their offices to move on up toaVPN encryption system as well.
вЂњBrute force decryption of the WPA and WPA2 systems using parallel processing has been on the theoretical possibilities horizon for some time - and presumably employed by relevant government agencies in extreme situations - but the use of the latest NVidia cards to speedup decryption onastandard PC is extremely worrying.
вЂњThe $64,000 question, of course, is what happens when hackers secureapecuniary advantage by gaining access to company data flowing acrossaWPA or WPA2-encrypted wireless connection. Will the Information Commissioner take action against the company concerned for an effective breach of the Data Protection Act.вЂќ
can i know your wireless type. is this point to point or point to multipoint? what is your outdoor antenna brand, type (directional or omni directional), Gain (dBi) ? what is your AP brand ?
တစ်ကယ်တော့ အခုပြောနေကြတဲ့ ဆိုက်ဒ်က lan အဆင့်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာသိလား ...... အဲဒါဆိုရင် AP နဲ့မရဘူးအထူး ထုတ်ထားတဲံ wireless flat ကို direct ထိုးတဲ့ဟာမှာရမယ်ဗျာ။။။ ဒီပိုစ်ကို ကျွန်တော် project လုပ်ဘူးတာရယ် interview မေးခွန်းရယ်ကြောင့် ကောင်းကောင်းသိနေတယ်ဗျာ ...... အပေါ်ကပြောသလို wireless Ap ထားပါတော့ Netgear ဗျာ အဲဒါကို AP ထောင်ပြီး ၂မိုင် ၃မိုင် လုံး၀မရဘူးဗျာ .... ဘာလို့လဲဆိုတော့ AP က ပတ်ပတ်လည် သွားတာ အဲဒေါ ၁မိုင် ၂မိုင်သွားဖို့ ဆိုရင် ကြားထဲကနေပြီး Repeater ထားကမယ် အင်း AP နဲ့ Reapter ကလည်း lineoutside ဖြစ်ကမယ် တနည်းဆိုရင် မြင်နေရမယ်ပေါ့ဗျာ ... အဲဒါမှ AP ကနေပြီး signal ကိုယူပြီး repater က တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ signal ကိုလွှင့်ပေးကတာ ... အဲ
ဒီ လိုလုပ်တဲ့ AP ကလည်း မရှိဘူးဆိုရင်အနညး်ဆုံး သိန်းဆယ်ဂဏန်းမှာ ရှိမယ်ဗျ .. ရန်ကုန်မှာ ရောင်းတဲ့ဟာတွေက 2ပေ မီးချောင်းလောက်ပဲရှိတယ် ကျွန်တော် လိုက်စုံစမ်းပြီးပြီ.... ကဲထား အဲဒီ Reapter ၂ခု နဲ့တင်ကို ရမယ်ထင် လားမရဘူးဗျာ ၂မိုင်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ၄ ခုလောက်ရှိမှ ရမယ် အနည်းဆုံးနော် ..... Flat နဲ့ ဟိုဘက်က wireless ကိုထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ရမယ် အဲဒါက ပတ်ပတ်လည်မသွားတော့ဘူး ရှေ့တည့်တည့်ကိုပဲ အပေါ်အောက် ပေ ၄၀ ပေါ့ဗျာ ခန့်မှန်းပေါ့ အဲလောက်နဲ့ ေ၀းေ၀းကိုသွားတယ် အဲဒါမှရမယ် ........ APတွေသာလိုက်ထောင်နေရင် ဆုံးတော့မှမဟုတ်ဘူး reapter ထည့်လို့ကို ...... repater တွေအရမ်းများလာရင်လည်းမကောင်းဘူး.... ဆက်ပြောပြမယ်
တနည်းဆိုရင် point to point ထိုးတယ်ပေါ့ဗျာ ... မှန်းပြီးထိုးကတာပဲ .... စျေးကလည်း မြောက်တယ်.......အဲလို နှစ်ဘက်ထိုးပြီးတော့ နောက် ပွိုင့်တစ်ခုကနေပြီး သူရဲ့ converter ကနေပြီးRG45 နဲ့ပြန်ထွတ်ယ် .... နည်းနည်းတော့ ခေါင်းစားကတယ်ဗျာ .... Cisco ရဲ့ Theory အရတော့ ကြားထဲမှာ ရေရှိနေရင်လည်းမေကောင်းဘူးဗျာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ reflection ပြန်ပြီး ရိုက်လာတဲ့ တစ်ခုရယ် ရှေ့တည်တည်ရောက်တဲ့တစ်ခုရယ်ဆိုရင် Conflit ဖြစ်တယ်ဆိုပဲ .... အဲဒီတော့ ဘာလုပ်ကလဲ ရေကန်နားမှာ လုံး၀ကို မထောင်ကဘူး ဒါလဲ သိပ်ပြသနာမရှိပါဘူးဗျာ ......
နောက်ပြီး အဲဒီ AP ရဲ့ တည့်တည့်မှာနေတိုင်းလဲ 100 ရာခိုင်နှုန်းမရဘူးနော် ..... ဒါပေမဲ့ အခု နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ MIMO ဆိုရင်တော့ ရမယ် ....အဲဒါကလည်း 300 ဆိုတော့ လက်ရှိ AP တွေကလည်း 108 အများဆုံးပဲဗျာ .. ကျွန်တော်မြင့်ဘူးတဲ့ဟာက 54 ပဲရတယ် .... မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ... ဆက်ပြောမယ်
လိုချင်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ wimax သိတယ်မဟုတ်လားအဲဒါမျိုး သာရှာပြီး၀ယ်ပေတော့ ... ဟိုဘက်နဲ့ ဒီဘက် တည်တည့်ကို မမြင်လည်းမှန်းပြီးသာ ဗျင်းပေတော့ ...တစ်ကယ်တော့ wireless နဲ့ပြေးမလား ဟဲ ဟဲ ပိုက်ဆံရှိရင် Fiber နဲ့သာပြေးပေတော့ အရမ်းကုန်မှာ ပဲ ပိုက်ဆံတော့ ခြင်းတောင်းနဲ့ထည့်ထား...... ဒါပေမဲ့ တစ်ခုက နည်းနည်းမြင့်တယ် တစ်ခု က အောက်မှာဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေတယ် ....... အဲဒီကကတော့ Noise နဲ့လည်းနည်းနည်းဆိုင်တယ် ....နောက်ပြီး link ကလည်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အရမး်ကို မထပ်ကဘူး ဗျ ... အဲထပ်ကုန်ရင် ရှော့ပဲ... ဥပမာ အိုလံပစ် တံဆိပ်လို့ ဖြစ်နေရမယ်ဗျာ repater ထပ်တည့်မယ်ဆိုရင် မိရင်ကိုရပြီ repater ကဆက်အလုပ်လုပ်မနယ်....... မဖြစ်မနေလုပ်ကမယ်ဆိုရင်၊ ပြီးတော့ ပုဂံကို အားမကိုးချင်ရင် Flat နဲ့သာထိုးပေတော့ ...... configure ကလည်းလွယ်ပါတယ်ဗျာ..... wireless ပိုင်းမှာ Linksys ကမဆိုးဘူးဗျ သူကတော့ထွက်မထွက်မသိဘူး ... Dlink ကတော့ထွက်တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်စမ်းမလို့ သွားမေးတော့ 150000 ခွဲစျေးတော့ကြိုက်တယ် အဲ သူက ဖန်ချောင်းပဲပါတယ် . အဲခက်တာက ကြိးကလည်းမတူဘူးပြန်၀ယ်မမယ်ဆိုလို့ မ၀ယ်ဖြစ်တော့ဘူး... Firmware မပါဘူး လုံး၀သက်သက် AP ပဲ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ repater က ၄ပေ မီးချောင်းလောက် router လည်းလုပ်လို့ရတယ်.... AP လညး်လုပ်လို့ရတယ် ..... repater လည်းလုပ်လို့ရတယ်... အဲပြောကအုံးမယ် ပူလာရင်တော့ နည်းနည်းကြောင်တယ်ထင်တယ် .... wireless ကြောင်နေရင် ဆက်မစမ်းနဲ့ ပင်ပန်းတယ် အေးဆေးနေပြီး error ကိုရှာကြည့်ပါ..... Flat ထိုးမယ်ဆို မြင့်လေ့ကောင်းလေပဲဗျာ ..... ဆက်ပြေမယ်
Flat မရှိဘူးနော် ကိုယ်ဟာကို လည်းလို့ရတဲ့ နည်းတွေလည်းရှိတယ်ဗျာ။။။အဲဒါတွေက အင်တာနက်ထဲမှာ ကျွန်တော်လည်းတွေ့ဘူးတာ.... ဟဲဟဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစမ်းဘူးတယ် .... ျwireless router ကို ဒယ်အိုးလိုဟာမျိုးထဲလည်း ထည့်လိုရတယ်ဗျာ ... အဲဒီတော့ လင့်က ရှေ့့တည်တည့်ကို တအားပြေးတယ်ဆိုပဲ .... အဲ နောက်ပြီး wirless ကထွက်တဲ့ တိုင်လေးနှစ်တိုင် သိတယ်မဟုတ်လားအဲဒါလေးနောက်ကနေပြီးပင်ကူအိမ်လေးလို သံဇကာပါးပါးလေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာပုံးနဲ့ပါတဲ့ ဖောနဲ့ လည်းပေါင်းပြီးlink ကောင်းအောင် လုပ်လို့ရတယ် .... နောက်တစ်ခု ကတော့ ... ကျွန်တော်တို့ အကင်တွေလုပ်တဲ့ ဇင့်ပြားလားမသိဘူး ပြောင်ပြောင်လက်လက် အပြားလေးလေဗျာ .......အဲဒါကိုလည်းနောက်မှာထညးပြီး Adapter ကိုဖမ်းကြည့် လင့်ပိုမိတယ် .... ကွန်တော် ရှောက်စမ်းတာ ဟားဟား Adapterတောင်ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး
youtube မှာလဲwireless hackingဆိုပြီးအများကြီးရှိတယ်ဗျာ စမး်ကြည့်ကြပါ
Thanks ပဲဗျို့... ကိုCyberhack ရေ..
အကိုပြောမှပဲ wireless အကြောင်းနားလည်လာတာ..
(ဒါနဲ့ အကိုကဘယ်မှာ networking တက်တာလည်းဟင်):101:
Computechရဲ့့ တပည့်ပါဗျာ ....
Doing Testing only is no problem for everything but in production environment testing nor I am still testing is not the answer. You must maintain reliable result every time therefore tell me testing results are not reliable in real environment. That's why real pros need day to day work.
pro အတွက်မလိုပေမဲ့ Beg အတွက်တော့ Test ကအရှင်ဘုရင်ပါပဲ .... pro အတွက်က ဘာလို့မလိုတော့ တာလဲဆိုတော့ သူက နည်းပညာကို အုပ်မိသွားပါပြီ ... ဥပမာဗျာ ကျွန်တော်တို့ Xp ကိုကိုင်ပြီး Vista ကို ပြောင်းသုံးတယ် Network configure တွေဘာတွေ က ပြောင်းသွားတယ် အခုမှ စလေ့လာတဲ့ သူတွေက XP ကိုသုံးကြည့်နေတုံးမှာ Vista ကို မသုံးတက်ပါဘူး ... ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ သုံးတက်နေတာလည်း နည်းပညာနဲ့ ကျွမ်း၀င်နေတယ် ... သုံးတဲ့ကာလကြာတယ် .... အဲဒါဟာ တစ်နည်းဆိုသော် နည်းပညာကို ကျော်သွားတာပါ ..... ဒီအတိုင်းပဲ စာသင်တဲ့သူတွေလည်း သင်ပါများလာတော့ ကျွမ်းကျင်လာတယ် Course အသစ်ထွက်တိုင်း ဘာလို့သင်နိုင်လည်း .... သူတို့မှာ ကအခြေခံတအား ကောင်းလာပြီကို ..... ဒီလိုပဲ အခြေခံကောင်းအောင်တော့ Test များများလုပ်ကြပါ ..... မြန်မာပြည်က အထက်မရောက် အောက်မရောက် ( ကျွန်တော်လို့ လူများ ) လည်း စမ်းကြပါခင်ဂျာ ........... နောက်တစ်ခု က တော့ ပြသနာဖြစ်လာရင် စိတ်မညစ်နဲ့ ပျော်ပျော်နေပါ ... အဲဒီပြသနာဟာ ကိုယ်အတွက် လှေကားပါပဲ .......
ကျွန်တော် အင်တာနက်စသုံးတုံးကဆိုရင် ဟာသပဲ ( Dial up ) က ၀င်သွားပြီ အင်တာနက် တက်လာမလားဆိုပြီး ကွန်ပျူတာကို ၂နာရီလောက် ထိုင်ကြည့်ဘူးတယ် ... ပုဂံကို ဖုန်း အခါ ( ၁၀၀ ) လောက်ဆက်ဘူးတယ် .... မှတ်မိသေးတယ် Access Kit စပေါ်ပေါ်ချင်း ၃ ရက်ကပါ .... အခုတော့
ဘာမှလဲမဆိုင်ဘူးနော် Topic နဲ့ ကြေငြာ၀င်တာ ဟီးဟီး